कोहलपुर मेडिकल कलेजमा एक बालिकाको मृत्युका कारण हङ्गामा – Vision Khabar
कोहलपुर मेडिकल कलेजमा एक बालिकाको मृत्युका कारण हङ्गामा
। ९ मंसिर २०७४, शनिबार १८:०८ मा प्रकाशित
कोहलपुर, ९ मंसिर । कोहलपुर २ आनन्दनगरमा बस्ने १५ बर्षिया लक्ष्मि सुनारको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो ।
उनि कौशिलानगर स्थित कृष्ण माध्यमिक बिद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा हुन । उनलाई शुरुमा टाईफाइट बढेका कारण उनलाई आईसयिूमा राखिएको थियो । तर पछि चिकित्सकले हेपटाईटिस सि भएको र उनलाई बचाउन नसकिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका थिए ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुमा डा. अनिता श्रेष्ठ, डा. श्याम बि.क, डा. अस्मिता नेपाल र डा. ब्रिजेश पाण्डे रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । कोहलपुर २ निवासी लक्ष्मि सुनारको अस्पतालका चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको पारिवार जनले आरोप लगाएका छन ।
बिरामी लक्ष्मी मंसिर ५ गते दिउसो २ वजे बिरामी भई मेडिकल कलेज कोहलपुमा भर्ना गरिएको थियो । लक्ष्मीको ७ गते बिहान ५ बजे मृत्यु भएको घोषणा गरेका थिय । बिरामी लक्ष्मी ७ गते बिहान ४ बजे सम्म ठिक भएको बिरामीले आफु घर जान चाहेको बताएको मृतक का दाईले बताएका छन तर उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले लक्ष्मीलाई ५ बजे मृत्यु भएको खबर परिवारजनलाई दिएका थिय । परिवार र आफन्तजनहरुले डाक्टरको लापरबाहीले बालिकाको मृत्यु भएको बताएका छन ।
आज बिहानै देखि मेडिकल कलेजमा परिवार र लक्ष्मीका साथीहरुले आन्दोलन गरेका छन जसका कारण अस्पताल प्रशासनको कार्यमा समेत अबरोध आएको छ । आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट मेडिकल कलेजमा रहेको गेटको सिसा फुटेको छ भने सिसाका कारण एक जना म्यादी प्रहरी घाईते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका डिएसपी यज्ञ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
बिरामीको लास परिवारजनले लिन मानेका छैनन् । हस्पिटलको लापरबाही भएको भन्दै परिवारजनले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन । आज भएको परिवार र अस्पताल प्रशासन बिचको बार्ता निष्कर्ष बिहीन भएको छ । अस्पताल प्रशासनले छानबिन समिती गठन गरि एक हप्ता भित्र प्रतिबेदन पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
छानबिन समितीमा कोहलपुर इलाका प्रशासनका अधिकृत दत्तराज हमाल, डा. कल्पना थापा, डा. खगेन्द्र जंग शाह, डा.कुलदिप सिँह गोहित प्रहरी निरीक्षक भिम ब. कार्की र पुजन बिश्वकर्मा रहेको छ । अस्पताल प्रशासन र पारीवारिक बार्ता सफल नभए पछि अहिले पनि मेडिकल कलेज कोहलपुरमा सयौँको सँख्यामा आफन्तजनहरु भेला भएका छन । उनिहरुको एउटै माग छ उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होस ।
चिकित्सकका लापरबाहीका कारणले हुने घटना मेडिकल कलेज कोहलपुमा कुनै नौलो होइन तर चिकीत्सकलाई कुनै कारबाही नहुदा बिरामी मृत्यूका घटना बढ्दै गएको हुन । यि र यस्ता खालका घटनाले बिरमीहरु अस्पताल जान समेत त्रसित भएका छन ।